Global Voices teny Malagasy » Mampiasa media sosialy i Bangladesh mba hiadiana amin’ny valan’aretina dengue · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Aogositra 2019 4:45 GMT 1	 · Mpanoratra বিজয় Nandika (en) i Rezwan, Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Voina
Nahitana tarehimarika ambony ny 22 jolay satria mararin'ny dengue 403 vaovao no nampidirina hopitaly tao anatin'ny 24 ora. Araka ny voalazan'ireo manampahaizana  sasany, ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro, ny orana tsy mitsahatra, ny toetr'andro tsy mahazatra ary ny tsy fisian'ny fahadiovana no antony voalohany amin'ny fiakaran'ny tranganà dengue. Nizara ihany koa ny sasany fa ny aretina dengue tamin'ity taona ity no tena nahafatesana olona noho ny tamin'ny herintaona. Araka ny voalazan'ilay mpisera Twitter, Md. Saif hoe:
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Bangla Tribune , nilaza ny Dr. Gulzar fa mora iharan'ny aretina indray ireo olona voan'ny dengue teo aloha.
Dokotera roa no matin'ny tazo Dengue, ary matahotra ny olona ankehitriny. Nampanantsoin'ny  Fitsarana Ambony ao Dhaka ny tompon'andraiki-panjakana ambony misahana ny fahasalamana. Mitombo ny isan'ny maty.
Nangataka  tamin'ny mpamaky azy ireo ny pejy Facebook BBC Bangla mba hitatitra momba ireo ezaka rehetra ataon'ny tompon'andraikitry ny tanàna ao Dhaka amin'ny fiadiana amin'ny fiparitahan'ny moka. Mpisera Mohammad Mynuddin nitatitra  ny fahatarana mahagaga ataon'ny governemanta amin'ny fiadiana ny valan'aretina:
Noho ny fahitan'ny maro ny tsy fahampian'ny fepetra raisin'ny governemanta na dia eo aza ny firongatry ny aretina dengue, miditra media sosialy ny vahoaka hanaovana fanairana momba ilay viriosy. Nampiditra lahatsary YouTube  ny sehatra fampahalalam-baovaon'olon-tsotra, Health Barta, mampiseho amin'ny antsipirihany izay tokony hatao rehefa misy olona tratran'ny tazo dengue:
Betsaka no mampiasa ny media sosialy mba hanangonana rà ho an'ny marary. Mpisera Sajid Islam Khan nisioka  fa mila rà ho an'ny rahalahiny mararin'ny dengue izy. Hannan Gazi nandefa hafatra mitovy amin'izany:
Noho ny valan'aretina, nofoanan'ny  ben'ny tanànan'i Dhaka City Avaratra ny fialan-tsasatra ho an'ireo mpiasan'ny fanesorana fako sy ny famonoana moka. Na izany aza, mba hiarovana ny olona amin'ny tazon'ny dengue, mbola maro ny ezaka ilaina
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/23/142240/
 aretina dengue : https://en.wikipedia.org/wiki/Dengue_fever
 miisa 7179 ny fitambaran'ny tranga voarakitra – ary efa ho 2800 : https://www.thedailystar.net/frontpage/403-infected-with-dengue-fever-in-bangladesh-last-24-hours-1775482
 lahatsary YouTube: https://youtu.be/YvZgkb0dU6w